လီဗာပူးနည်းပြ ကလော့ ခံစစ်ကစားပုံနှင့်ပတ်သတ်၍ပြော - Myanmarload
လီဗာပူးနည်းပြ ကလော့ ခံစစ်ကစားပုံနှင့်ပတ်သတ်၍ပြော
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ် က 10:28 September 25, 2017
စနေနေ့က အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်(၆)ပွဲစဉ်များကို ကစားခဲ့ကြပါတယ်။ လီဗာပူးအသင်းကတော့ လက်စတာစီးတီးနှင့် ကစားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲစဉ်မှာ လီဗာပူးအနေနှင့် လက်စတာစီးတီးကို ခက်ခက်ခဲခဲ ကစားခဲ့ရပါတယ်။ လီဗာပူးအနေနှင့် လက်စတာစီးတီးကို ၃-၂ဂိုးရလဒ်ဖြင့်အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။
ထို့ပြင် လက်စတာစီးတီးကို ၂ဂိုးပေးခဲ့ပြီးနောက်မှတော့ ယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာလည်းအသင်းရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအမှားအယွင်းတွေများနေပြီးပေးဂိုးများစွာခွင့်ပြုနေရတာနဲ့ပက်သက်ပြီးလီဗာပူးနည်းပြယာဂန်ကလော့က "ကျွန်တော်တို့ဂိုးတွေအများကြီးပေးခဲ့ရတာကတော့သိသာပါတယ်။ သံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ ဒါတွေဟာကျွန်တော့််ကိုနာကျင်စေပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဟာခံစစ်အားသန်နည်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာသိပ်ပြီးမလုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ခံစစ်အတွက်အဓိကအရေးကြီးတဲ့အရာကနည်းစနစ်ကျအောင်ကစားဖို့ပါ။
ကျွန်တော်ဘောလုံးအကြောင်းအလုံးစုံမသိပေးမယ့် ဘယ်နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရမလဲ? ဘာ့ကြောင့်လဲ? ဘယ်အချိန်တက်ပြီးဘယ်အချိန်တွန်းရမလဲ? ဘယ်နေရာမှာရှိသင့်တယ်ဆိုတာကိုလာမည့်၂နာရီအတွင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ရေးလို့ရပါတယ်။ ကစားသမားတိုင်းဒါကိုမလုပ်နိုင်သေးသ၍ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်သွားရမှာပါ။ ကစားသမားတိုင်းလုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးမှာပါ။ ကျွန်တော့်မှာယုံကြည်ချက်ရှိပါတယ်။ တိုက်စစ်ကစားသမားတွေကိုပဲမဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးကိုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရလဒ်ကောင်းတွေလိုနေတာသိပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီအသင်းကိုအရမ်းနှစ်သက်ပါတယ်။ ခံစစ်ပိုင်းတိုးတက်အောင်အားလုံးအတူတကွလုပ်ဆောင်သွားချင်ပါတယ်။" လို့ပြောသွားပါတယ်။